Aretina - Tontolo alika | Tontolo alika (Pejy 2)
Wax mainty amin'ny sofin'ny alikao
Manana savoka mainty ao an-tsofiny ve ny alikanao? Raha izany dia midira fa holazainay aminao ny mety ho antony sy ny fepetra tokony hataonao hanatsarana azy.
Antony kibo mivonto amin'ny alika
Te hahafantatra ny mety ho antony mety mahatonga ny alikao mivonto sy mafy kibo ve ianao? Midira ary fantaro.
Mandoa ve ny alikao aorian'ny fisotroana rano? Te hahafantatra ny antony sy ny antony mety hitrangan'izany ve ianao? Midira ary fantaro.
Efa ela ve ianao no nijery ny alikanao malemy tamin'ny iray amin'ny tongony aoriana? Ampidiro ary fantaro izay mety ho antony sy ny fomba hampiatoana azy!
Afaka mahazo aretina azo avy amin'ny firaisana ve ny alika?
Fantatrao ve fa ny alika dia mety manana aretina azo avy amin'ny firaisana? Midira ary holazainay aminao hoe iza avy ireo, ireo soritr'aretina ary inona no tokony hataonao hisorohana azy ireo.
Inona no mahatonga ny fanafihana alika?
Matetika ve ny alikao dia misintona maromaro sa matetika izy ireo indraindray? Ampidiro ary fantaro ny antony alohan'ny hitsaboana ilay aretina.
Euthanasia, oviana ny alika no tokony hamonoana ny alika?
Namorona torolàlana kely misy toro-hevitra maromaro izahay mba hahafantaranao hoe rahoviana ny euthanize alika, eny, zahao foana amin'ny mpitsabo anao.
Antony, soritr'aretina ary fitsaboana ny aty voan'ny hoditra
Mahamarika ny alikanao hafahafa ve ianao ary mieritreritra fa mety ho nivonto ny atiny? Ampidiro ary fantaro ny antony, ny soritr'aretina ary ny fitsaboana hépatite amin'ny alika.
Fa maninona ny alika no mandoa ka mivalana
Manahy ny alikanao ve ianao? Mandoa ve izy ary mivalana miaraka amin'izay? Midira ary jereo ny antony mahatonga izany.
Bumps amin'ny alika
Voamarikao ve fa misy alika na vombony ny alikanao? Ampidiro dia holazainay aminao ny mety ho antony sy ny tokony hatao hikarakarana azy.
Mivonto ny molotra ao amin'ny alika: inona no dikan'izany
Ny molotra mivonto amin'ny alika dia mety ho antony fitandremana. Ampidiro ary fantaro izay antony ary inona ny fepetra raisina mba hihatsaran'ny alika.
Mijaly amin'ny colic ve ny alikako?
Jereo ny soritr'aretin'ny colika amin'ny alika, inona ny fitsaboana sy fikarakarana tokony hanananao raha mijaly amin'ity alika ity ny alikanao.
Ny fanaintainan'ny vavony amin'ny alika dia mety ho aretina mahazatra, saingy mila mianatra mamantatra azy ianao. Ampidiro dia holazainay aminao ny fomba hanaovana izany.
Inona no tokony hataontsika raha maneno be ny vavonin'ny alika?
Raha tsikaritrareo fa mihetsiketsika be ny vavonin'ny alika ary ankoatran'ny mandoa izy dia midira ary holazainay aminareo ny mety ho antony sy ny fepetra tokony horaisinareo.
Inona no dikan'ny hoe maso feno rano amin'ny alika?
Mitomany ve ny mason'ilay alikao ary tianao ho fantatra ny dikan'izany? Midira ary holazainay aminao ny antony mety hahatonga azy ireo, ary koa ny zavatra tsy maintsy ataonao hanatsarana azy.
Mpianatra tsy mitovy amin'ny alika: inona no dikan'izany?
Ny mpianatra tsy mitovy amin'ny alika dia antsoina hoe anisocoria ary mety vokatry ny olana isan-karazany. Midira dia holazainay aminao hoe inona izany.
Antony mahatonga ny alikanao mandeha rà avy amin'ny filahiana
Miala ra amin'ny alika ve ny alikao? Raha izany dia midira fa holazainay aminao ny antony mety mahatonga an'io olana io, izay mety ho lasa matotra be.
Maharitra hafiriana ny alika voan'ny homamiadana?
Lazainay aminao ny faharetan'ny alika voan'ny homamiadana, ary ahoana no ahafantaranao raha manana an'io aretina io ny alikanao volo. Ampidiro ary jereo ihany koa ny fomba itondrany azy.
Ahoana no fanasitranana gastroenteritis amin'ny alika?
Tsy salama ny alikanao? Midira ary holazainay aminao ny fomba fanasitranana gastroenteritis amin'ny alika. Fantaro izay azonao atao hanampiana azy ho sitrana haingana araka izay tratra.
Fanafody an-trano hanasitranana ny conjunctivitis an'ny canine
Inona avy ireo fanafody any an-trano mahomby indrindra hanasitranana ny conjunctivitis an'ny canine? Midira ary tadiavo mba hahasitrana haingana ny volonao.
Fa maninona no mihorohoro ny alikako ary inona no tokony hataoko hanampiana azy?
Manahy ve ianao sao hanetsiketsika ny alikanao ary tsy hijanona tsy hangovitra? Ampidiro ary fantaro ny antony mahatonga ny alika hangovitra.
Ahoana ny fomba hitsaboana ny mange amin'ny alika miaraka amin'ny fanafody ao an-trano
Ianaro ny fomba isan-karazany sy ny fitsaboana voajanahary izay ahafahantsika manasitrana alika misy olana mange ary tsara indrindra amin'ny rehetra.
Ahoana ny famindrana alika maratra
Androany any amin'ny ankamaroan'ny trano dia alika iray farafaharatsiny. Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia hanome torohevitra vitsivitsy momba ny fomba famindrana alika maratra izahay.
Mangidihidy sofina amin'ny alika
Manenjika ny sofiny foana ve ny alikao toa ny sofina mangidihidy? Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny antony mety sy izay azonao atao.
Malemy ny zanako kely
Voamarikao ve ny zanakao malemy? Raha tsy te hihinana koa ianao dia marary mandoa sy mivalana, ity ny lahatsoranao. Lazainay aminao izay mety ho izy sy ny fomba fihetsika amin'izany toe-javatra izany.
Antony, fitsaboana ary soritr'aretin'ny hemoparasites amin'ny alika
Mieritreritra ve ianao fa ny alikanao dia mety hijaly amin'ny hemoparasites? Ampidiro ary fantaro izay ny soritr'aretina sy ny antony ary ajanony io!
Inona ny myasthenia gravis amin'ny alika?
Voamarikao ve ny alikanao malemy, tsy manan-kery ary tsy reraka? Mety voan'ny myasthenia gravis izy, koa ampidiro ilay lahatsoratra ary fantaro ireo soritr'aretina!
Maty an-drano ny alikako
Milentika ve ny alikao? Mety noho ny antony maro samihafa izy io. Raha te hahafantatra misimisy kokoa ianao, dia midira ao ary hanazava ny fomba fiasa izahay raha sendra ao anatin'ireny toe-javatra ireny ianao.
Inona avy ireo aretina mahazatra any Fox Terriers
Raha manana alika toy ny amboahaolo ianao dia zava-dehibe ny hahafantaranao fa alika marefo izy ireo ary mety hijaly amin'ny aretina mahazatra. Fantaro izy ireo !!
Furosemide amin'ny alika
Efa tany amin'ny mpitsabo biby ve ianao ary nanamboatra furosemide ho an'ny alikanao? Raha manana fisalasalana ianao momba ny inona izany sy ny antony hanaovana azy, midira ary fantaro!
Meloxicam ho an'ny alika
Efa tany amin'ny mpitsabo ve ianao ary nanisy meloxicam ho an'ny alikanao? Raha manana fisalasalana ianao momba ny inona izany sy ny antony hanaovana azy, midira ary fantaro!
Olana voa ao amin'ny alika
Mihevitra ve ianao fa mety manana olana amin'ny voa ny alikanao rehefa hitanao fa misotro rano betsaka kokoa noho ny mahazatra izy? Ampidiro ary fantaro amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity hoe iza izy ireo.
Alika brachycephalic sy ny olana mahazo azy
Raha manana bulldog ianao, shih tzu na alika hafa manana endrika fisaka, midira ary fantaro ny fomba hanatsarana ny kalitaon'ny alika brachycephalic.
Te hahafantatra ve ianao amin'ny fotoana sy fomba hanomezana Metronidazole ny biby fiompinao raha marary izany? Ampidiro ary fantaro ny zava-drehetra momba ity zava-mahadomelina ity !!
Inona ny vaksininy dimy heny ho an'ny alika?
Raha tianao ho salama ara-pahasalamana ny alikanao ary amin'ity fomba ity tsy harary dia tsy maintsy omena azy ilay vaksinina avo dimy heny. Fantaro io !!
Inona izany ary inona avy ireo soritr'aretin'ny Balanoposthitis amin'ny alika?
Raha tsikaritrareo fa ny alikanao dia mikiaka sy manafina andian-doha, mahatsapa alahelo sy alahelo, mety ho voan'ny Balanoposthitis izy. Ampidiro ary fantaro ireo soritr'aretina!
Inona no ary inona avy ireo soritr'aretin'ny neosporosis?
Raha mieritreritra ianao fa ny alikanao dia mety mijaly amin'ny aretina antsoina hoe canine neosporosis, aza mieritreritra indroa ary mahita ireo soritr'aretina sy fitsaboana!
Maso manga amin'ny alika
Fantatrao ve ny areti-maso manga amin'ny alika? Ampidiro ary fantaro ny soritr'aretin'ity aretina ity mba hijanona haingana araka izay tratra.
Hemofilia amin'ny alika
Jereo izay rehetra misy ifandraisany amin'ny aretina ra amin'ny alika antsoina hoe hemophilia. Fantaro ireo karazana, soritr'aretina ary fikarakarana hisorohana azy.
Parvovirus amin'ny canine
Raha tianao ny alikanao tsy hijaly amin'ny aretina mampatahotra antsoina hoe canine parvovirus, tandremo ny soritr'aretina, ny fifindran'ny aretina ary ny fitsaboana.
Raha te hahalala ianao raha misy alika filariasis ny alikao, ny soritr'aretina, ny fitsaboana ary ny fomba fitiliana an'io aretina io? Midira ary fantaro.
Aretin'ny alika vacuum
Fantatrao ve hoe Vacuum Dog Syndrome? Fantaro ny fomba hisorohana azy, ny antony sy ny vokany izay mahatonga ny alikantsika hihinana izay hitany.
Hip dysplasia amin'ny alika
Jereo hoe inona ny momba ny dysplasia eo amin'ny alika, satria io aretina io dia misy vahaolana aloha, noho ny fikarakarana sy ny fitsaboana voalaza.
Ra ao amin'ny seza ao amin'ny alika
Manahy ny amin'ny fahasalaman'ny alika ve ianao? Jereo hoe inona no dikan'ny alika manana rà ao amin'ny fitoerany, soritr'aretina ary fitsaboana izay misy ankehitriny.
Manaikitra amin'ny alika ny fllea
Be loatra ny alikanao? Mieritreritra ve ianao fa mety manana parasy ity? Topazo maso ireo soritr'aretina, torohevitra ary tolo-kevitra hamongorana azy ireo.
Trakitra ambany amin'ny alika
Manahy ny amin'ny fahasalaman'ny alika ve ianao? Jereo hoe inona ny ambany platelet amin'ny alika, ny soritr'aretina ary ny diagnostika ary ny fitsaboana misy ankehitriny.
Bilirubin avo amin'ny alika
Manahy ny amin'ny fahasalaman'ny alika ve ianao? Jereo hoe inona ny labiera ambony amin'ny alika, fanasokajiana, soritr'aretina ary fitsaboana misy ankehitriny.
Inona no ary oviana no tokony hampiasana milbemax?
Jereo hoe inona ilay fanafody antsoina hoe Milbemax, inona izany ary amin'ny toe-javatra manao ahoana no azo ampiasaina hanatsarana ny fahasalaman'ny alika. Jereo !!
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny leishmaniasis, aretina iray izay mety hisy fiantraikany amin'ny alika noho ny kaikitry ny moka.
Inona no atao hoe Ultra Levura ary inona no ilana azy?
Jereo hoe inona ny zava-mahadomelina Ultra Levura, inona izy io ary amin'ny toe-javatra manao ahoana no azo ampiasaina ity probiotic ity hanatsarana ny fahasalaman'ny alika.
Coccidiosis amin'ny alika, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny coccidiosis amin'ny kanine dia aretina manafika ny tsinainin'alika ary mety ho matotra, noho izany dia ilaina ny misoroka. Fantaro ny fomba
Leysmaniasis, inona izany ary ny fitsaboana ny alika
Jereo hoe inona ny aretina lesimaniosis, inona ny soritr'aretina, ny diagnostika ary ny fitsaboana sy fisorohana azo atao.
Alika celiac, diagnostika ary fitsaboana
Ny alika celiac dia ireo izay mijaly amin'ny tsy fahazakana gluten, izay no mahatonga azy ireo hiteraka olana amin'ny vavony ary hanjary tsy ampy sakafo mihitsy.
Diso ny alika amin'ny alika
Hipoka amin'ny alika dia olana iray miseho noho ny trauma, noho izany ny alika dia tsy maintsy mitsidika ny vet.
Fihetsika manery amin'ny alika
Ny fihetsika manery amin'ny alika dia mety hanjary olana ara-pahasalamana lehibe, noho izany dia ilaina ny manaiky sy mitsabo azy ireo.
Toetran'ny hoditra amin'ny alika sy ny fitsaboana azy ireo
Ny aretin-koditra amin'ny alika dia karazana olana izay maharitra fotoana maharitra ary tsy maintsy tsaboina. Te hahafantatra azy ireo ve ianao?
Aretina mahafaty alika
Raha manana alika ianao na mikasa ny hanana izany dia tena zava-dehibe ny aretina mahafaty indrindra azon'izy ireo iaretana. Midira ary fantaro.
Olana amin'ny fandevonan-kanina amin'ny alika
Raha manana alika ao amin'ny fianakavianao ianao dia tokony handinika ireo aretina mety hijaly, toy ny olana amin'ny fandevonan-kanina. Jereo hoe iza izy ireo.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fitohanana amin'ny alika kely
Raha tsikaritranao fa manana olana amin'ny fikorontanana ny alikanao dia mety ho voageja izy. Araho ny torohevitra ary araraoty ny alokaloky ny alikanao.
Fikarakarana amin'ny alika antitra
Zava-dehibe ny fahalalana izay azontsika atao sy tsy azontsika atao raha toa ka antitra ny alika. Diniho tsara ary alao antoka fa voakarakara tsara ny alikanao.
Afaka misavoritaka ve ny alika na dia vita vaksiny aza?
Afaka misavoritaka ve ny alika na dia vita vaksiny aza? Raha miahiahy momba ny fahasalaman'ny volonao ianao ary manana izany fisalasalana izany, midira ary izahay dia hamaha izany ho anao.
Torohevitra hifehezana ny fandefasana alika
Ara-dalàna ho an'ny alika ny mandatsaka ny volony sasany, na izany aza, ohatrinona ny volon'izy ireo tokony ho very hahafantatra raha be loatra izany? Ny ankamaroan'ny alika raha mandatsaka ny alikanao ary hitanao fa mandany mihoatra ny mahazatra izy dia midira ao anatiny ary jereo ireo mety ho antony.
Aretim-pivalanana amin'ny alika antitra
Mandrosoa ary holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fivalanan'ny alika antitra: antony, fitsaboana ary maro hafa. Aza adino izany.
Ahoana no hitsaboana ny orona alika maina
Jereo ny fomba hitsaboana ny fahamainana eo amin'ny oron'ny alika, ny antony mahatonga azy io sy ny fomba hiadiantsika aminy.
Fomba fiaina mipetrapetraka amin'ny alika, olana ary ahoana no hisorohana izany
Ny fomba fiaina mipetrapetraka amin'ny alika dia tokony hialana, satria misy ifandraisany amin'ny olana ara-pahasalamana maro toy ny lanjany be loatra na diabeta.
Aretina mahafaty izay misy fiatraikany amin'ny alika
Misy aretina sasany amin'ny alika mety hahafaty, ilaina koa ny mitadidy fa ny fiompiana dia zavatra mahavita mitaona azo antoka fa efa fantatrao fa misy aretina sasany amin'ny alika izay matetika mahafaty, saingy fantatrao ve izy ireo? Midira ary fantaro.
Fivontosana hormonina amin'ny alika
Lazainay aminareo rehetra ny momba ny fivontosan'ny hormonina amin'ny alika: ny soritr'aretin'izy ireo, ny fitsaboana azy ireo ary maro hafa koa mba hahafantaranareo ny mamantatra azy io faran'izay haingana.
Amnesia amin'ny alika
Eny, amnesia amin'ny alika dia zava-misy mampalahelo. Midira ary holazainay aminao hoe inona ireo soritr'aretina ary inona no azo atao mba hitohizan'izy ireo amin'ny fiainana ara-dalàna.
Ny areti-nify mahazatra indrindra amin'ny alika
Alika toy ny olona voan'ny aretin-nify. Te hahafantatra ny fomba hahazoana alika manana nify salama sy matanjaka ve ianao? Midira ary fantaro.
Dermatitis lena mando amin'ny alika
Ny dermatitis lena mando dia aretina amin'ny alika mahazatra, fantatra koa amin'ny hoe "toerana mafana", izay matetika dia matetika no miseho. Mieritreritra ve ianao fa ny alikanao dia voan'ny dermatitis lena? Te hahafantatra ve ianao hoe inona ireo soritr'aretina ireo? Midira ary fantaro.
Mieritreritra ve ianao fa ny alikanao dia mety hijaly noho ny tsy fahombiazan'ny fo? Raha te hahafantatra izay soritr'aretina ianao sy ny antony isehoan'izany matetika dia tandremo.
Voapoizina ny alikako
Efa fantatsika fa ny alika amin'ny natiora dia mety ho lasa liana loatra ary ny sasany aza somary mikimpy sy tsy mitandrina, indrindra raha izy ireo Fantantsika fa ny alika dia mety ho lasa liana loatra, ka tsy maintsy fehezinao izay napetrany am-bavany, mba tsy ho voapoizina
Te hahafantatra ny soritr'aretina sy ny karazana leukemia kaninina ve ianao? Mihevitra ve ny alika fa mety voan'ny leukemia? Midira ary fantaro.
Kibon'ny alika, inona no tokony ho fantatsika
Ny vavonin'ilay alika dia taova mety marefo ary mila fikarakarana kely hisorohana ny fisehoan'ny aretina.
Vato voa ao anaty alika
Milaza aminao izahay rehetra momba ny vato voa ao amin'ny alika. Ampidiro ary fantaro izay soritr'aretina sy fitsaboana an'io aretina io.
Babiosezy amin'ny canine
Canuna babesiosis dia aretina lehibe tokoa izay misy fiantraikany amin'ny alika. Midira ary holazainay aminao hoe inona ireo soritr'aretina sy fitsaboana.
Fitsapana alika ho an'ny alika
Ny alika dia mety hijaly noho ny antony sasany, ary hahitana ny antony mahatonga azy ireo olana dia ny fitsapana ny allergy.
Diabeta amin'ny alika
Ny diabeta amin'ny alika dia tsy maintsy dinihina mba hikarakarana ilay biby, satria aretina mitaiza izay mila fitsaboana.
Fa maninona no maty an-drano ny alikako ary ahoana no hanampiako azy?
Raha efa nilaza ianao hoe '' maty alika ny alikako '', midira ary holazainay aminao ny antony mahatonga azy io ary inona ny fepetra tokony hataonao hanatsarana ny fiainany.
Ahoana ny famahanana alika amin'ny megaesophagus?
Mieritreritra ve ianao fa voan'ny aretina megaesophagus ny alikanao? Raha izany dia ampidiro ary tadiavo ireo soritr'aretina sy fitsaboana hanomezana anao kalitao fiainana tsara.
Fikarakarana alika misy leishmaniasis
Leishmaniasis na leishmaniasis dia aretina manimba ny hery fiarovan'ny alika ary ampitain'ny parasite antsoina hoe Leishmania.
Aretina mahazatra amin'ny alika beagle
Ny alika beagle dia manana aretina mahazatra tsy maintsy fantatrao mba hisorohana azy ireo na hampiatoana azy ireo raha mijaly amin'izy ireo izy ireo.
Fantatrao ve hoe inona ity aretina antsoina hoe Pyoderma ity? Te hahafantatra ny fomba hahalalana fa mijaly amin'ity alika ity ny alikanao? Midira ary fantaro.
Inona no hatao raha very volo be ny alika
Te hahafantatra ny antony mahatonga ny fihenan'ny volo alika sy ny fomba hiatrehanao izany? Midira ary fantaro.
Kohaka manaikitra, laryngotracheitis, na kohaka kennel
Te hahafantatra ve ianao hoe kohaka alika na kohla kennel, ny antony ary ahoana ny fanaparitahana azy? Midira ary fantaro.
Ahoana ny fomba hisorohana ny kibo miolakolaka amin'ny alikanay
Ny torsion amin'ny vavony na ny toriteny amin'ny vavony dia aretina lehibe tokoa izay misy fiantraikany amin'ny alika na inona na inona habe, na dia alika lehibe aza no mora voany. Mila fitsaboana veterinera eo noho eo.
Pnemonia amin'ny alika
Ampidiro ary fantaro ny zava-drehetra momba ny pnemonia amin'ny alika: soritr'aretina, antony, fitsaboana ary maro hafa. Mianara mikarakara ny namanao amin'ity olana ity ary ampio izy hihatsara.
Aretin'i Horner amin'ny alika
Fantatrao ve hoe inona ny aretin'i Horner amin'ny alika? Ampidiro ary fantaro ny antony sy ny fitsaboana misy fiatraikany amin'ny hozatry ny alikantsika.
Alikaola amin'ny alika
Te hahafantatra ve ianao raha manana alikaola amin'ny alika ny alikao na ny tsy zakany? Midira ary fantaro. Tari-dalana feno momba ny alika sy ny aretin'ny sakafo
Gastroenteritis amin'ny alika, inona no tokony ho fantatrao
Gastroenteritis amin'ny alika dia aretina malemy izay azontsika atao ny manasitrana ao an-trano, miaraka amin'ny faningana sasany, noho izany dia mila fantatrao tsara izany.
Ny alikako dia manana dandruff: fa maninona?
Toa antsika ihany koa ny alika. Na dia toa tsy dia zava-dehibe loatra aza izany amin'ny voalohany, dia mety ho famantarana ny olana ara-pahasalamana isan-karazany. Noho izany dia tsy tokony hiraharaha azy io mihitsy isika.
Ny distemper amin'ny alika dia aretina mifindra izay mety hahafaty ny alika ary tokony ho fantatsika mba hisorohana azy.
Fikarakarana inona no ilain'ny alika misy distemper?
Fantatrao ve fa ny distemper alika dia mampidi-doza, na aretina mahafaty aza? Te hahafantatra izay fikarakarana ilain'ny alika misy distemper ve ianao? Midira izao.
Afaka manana piometra ve ny alika maty paika?
Efa mba nanontany tena ve ianao raha afaka manana pyometra ny alika maty? Aza misalasala! Midira ary holazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba io aretina io.
Kanseran'ny lymphatic amin'ny alika
Te hahafantatra ve ianao fa ny Kanseran'ny Lymphatic amin'ny alika sy ny fomba fihetsika manohitra an'io aretina io? Midira ary fantaro.
Inona avy ireo soritr'aretina sy fitsaboana ny homamiadana amin'ny alika?
Lazainay aminao ny zava-drehetra momba ny homamiadana amin'ny alika: ny soritr'aretiny, ny fitsaboana azy ary maro hafa koa mba hahafantaranao ny mamantatra azy io faran'izay haingana.
Fa maninona ny alika no mandoa be?
Manontany tena ve ianao hoe maninona ny alika no mandoa be? Midira ary holazainay izay mety ho antony mety hitranga sy ny tokony hataonao hanatsarana azy.
Brachycephaly: inona izany, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny brachycephaly na ny brachycephalic syndrome dia miteraka andianà olana amin'ny taovam-pisefoana amin'ny alika mitsoboka. Raha tsy misy fitsaboana sahaza azy ireo dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahasalamanao izany.
Inona avy ireo soritr'aretina sy fitsaboana ny ectropion amin'ny alika?
Lazainay aminao ny momba ny soritr'aretina sy ny fitsaboana ny ectropion amin'ny alika mba hahafantaranao ny mamantatra sy mitsabo azy.
Fambara, fitsaboana ary fikarakarana ny aretina Addison amin'ny alika
Fantatrao ve ny aretina Addison izay matetika iharan'ny alika? Te hahafantatra ny soritr'aretiny sy ny fitsaboana azy ve ianao? Midira ary fantaro.
Soritr'aretina gripa amin'ny alika
Te hahafantatra ireo soritr'aretina sy fikarakarana ilain'ny alika ve ianao rehefa voan'ny gripa? Midira ary fantaro.
Parvovirus, soritr'aretina ary fikarakarana
Parvovirus dia viriosy iray misy fiatraikany amin'ny rafitra fandevonan-kanina ny alika ary mety hitranga indrindra amin'ny alika kely ...
Fanafihana anaphylactic amin'ny alika
Ny fikorontanana anafilika amin'ny alika dia vokatry ny fiasan'ny alika mahery ary mety hanohintohina ny ain'ny alika, noho izany dia tsy maintsy raisina avy hatrany ny hetsika.
Inona no atao hoe leishmaniasis, soritr'aretina ary fitsaboana
Ity aretina ity dia mifindra amin'ny alàlan'ny kaikitry ny moka voa izay mihinana ny ran'ny alikantsika. Ianaro ireo soritr'aretina hanasitranana azy.
Inona no hatao ary inona no ananan'ny rà ao amin'ny fitoeran'alika antsika?
Voamarikao ve fa rehefa manandrana manidina ny alikanao dia amin'ny ra izany, na misy loko eo amin'ny lafiny mainty ny poof? Ampidiro ary fantaro izay tokony ho antony.
Spondyloarthrosis: soritr'aretina, fitsaboana, fikarakarana
Spondyloarthrosis ossificans dia aretina mihasimba izay misy fiantraikany amin'ny hazondamosin'ny alika, indrindra ireo izay efa antitra. Miresaka momba io aretina io izahay, ny soritr'aretiny, ny fitsaboana mety ary ny fikarakarana fototra.
Ny tsy fahombiazan'ny voa amin'ny alika
Mieritreritra ve ianao fa ny alikanao dia mety hijaly amin'ny aretina toy ny tsy fahombiazan'ny voa maharitra? Raha izany dia jereo ny lahatsoratray.
Sakafo sy vato voa ao anaty alika
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao ny fomba hisorohana ny vato voa ao amin'ny alika, amin'ny alàlan'ny sakafo, satria misy ifandraisany betsaka amin'izany.
Fahalalana fototra momba ny marenina amin'ny alika
Ny famindrana alika amin'ny alika dia tsy fetra lehibe, fa afaka manova ny fomba fiainany sy ny fomba fifandraisantsika amin'izy ireo.
Ny antony sy ny fitsaboana ny pharyngitis amin'ny alika
Ny pharyngitis dia fivontosan'ny sela malemy sy ny mucosa ao amin'ny pharynx, ary koa ny rafitra lymphatic. Olana be dia be io ary mety noho ny antony maro samihafa amin'ny natiora samy hafa.
Ahoana no hiadiana amin'ny sery amin'ny alika?
Mieritreritra ve ianao fa marary ny alikao ary mieritreritra ve ianao fa nahazo sery? Ampidiro ary fantaro ny fomba hiadiana amin'ny hatsiaka amin'ny alika.
Ianaro ny fomba fanadiovana ny sofin'ny alika ao an-trano
Fantaro ny fomba fanadiovana sofina alika tsotra hisorohana ny aretina atahorana ny sofina ary hahadio tsara kokoa.
Ny Dachshund sy ny aretina matetika matetika
Ny dachshunds dia matetika iharan'ny olana satria ny lamosiny lava sy ny tongony fohy dia mametraka adin-tsaina amin'ny lamosina sy ny hazondamosiko. Midira ary fantaro ny aretiny.
Inona ny aretina Shaker amin'ny alika?
Mangovitra ve ny alikanao tsy misy antony? Ampidiro ary hanazava ny atao hoe Shaker Syndrome, aretina tsy dia fantatra loatra izay tsy maintsy tsaboina hanatsarana ny kalitaon'ny biby.
Thelazia amin'ny alika
Ahoana no ahalalanao fa ny alikanao dia mety hijaly amin'ny aretina antsoina hoe thelazia? Jereo ireo soritr'aretiny amin'ny alàlan'ny lahatsoratray.
Manadio ny mason'ilay alika isan'andro
Ny mason'ilay alika dia tsy maintsy diovina isan'andro, satria raha tsy izany dia mety hiseho ny olana toy ny conjunctivitis, ary io koa dia olana amin'ny tarehy.
Maso maina ao amin'ny alika: antony sy fitsaboana
Ny "Syndrome maso maina" amin'ny alika dia iray amin'ireo areti-maso matetika ao amin'ny maso, ary vokatry ny tsy fahampian'ny dingana aqueque an'ny ranomaso na ilay horonan-tsarimihetsika mialoha.
Mety ho sosotra ara-pihetseham-po ny alika
Ny alika dia mety hijaly amin'ny fikorontanana ara-pihetseham-po isan-karazany azo avy amin'ny toe-javatra samihafa koa, ka tsy maintsy mianatra mamantatra azy isika.
Fambara sy fitsaboana ny homamiadan'ny nono amin'ny bitika
Fantaro raha voan'ny homamiadan'ny nono ny alikao amin'ny alàlan'ny soritr'aretina hita amin'ity lahatsoratra ity ary fantaro ny fitsaboana misy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao ny fomba hisorohana ny vato voa ao amin'ny alika, ny fomba hianarana ireo karazana misy ary ireo soritr'aretina.
Ahoana ny fomba hanamafisana ny hery fiarovan'ny alikao
Ny alika koa dia manana hery fiarovan-tena miaro azy amin'ny aretina sy ny areti-mifindra, fa raha mihaosa kosa izy io dia miteraka olana, koa mila manamafy azy isika.
Ahoana no ahafantarako raha voan'ny homamiadan'ny taolana ny alikako?
Ahoana no ahafantarako raha voan'ny homamiadan'ny taolana ny alikako? Raha miahiahy ianao fa mety manana an'io aretina io ny volonao, dia midira ary holazainay aminao ny tokony hatao.
Ahoana no ahafantarana raha malemy ny alikako?
Ahoana no ahafantarana raha malemy ny alikako? Ny paralysisa dia olana mandrakariva izay tsy tokony hanahirana antsika. Midira ary holazainay aminao izay tokony hatao hanampy anao.
Fikarakarana amboa alika fototra
Jereo hoe inona ny fikarakarana fototra amin'ny sofin'ilay alika, hahazoana fahasalamana ara-pahasalamana tsara indrindra amin'ny fihetsika tena tsotra.
Ahoana no hiadiana amin'ny alika amin'ny alika?
Miahiahy ve ianao fa mety misy allergy ny volonao? Midira ary holazainay aminao ny fomba hiadiana amin'ny alika amin'ny alika ary amin'izany dia hanana kalitaon'ny fiainana tsara kokoa.
Ny fanadiovana ny nifin'ny alika no zava-dehibe kokoa noho ny eritreretinao
Ny fanadiovana ny vavan'ny alika dia tena zava-dehibe mba hahazoana antoka ny nify salama, ary azo atao ao an-trano amin'ny fitaovana vitsivitsy.
Fetsy hialana amin'ny fivadihan'ny vavony
Misy fika tsara sasany izay afaka manampy antsika hisoroka ny kibo mahatsiravina amin'ny alika, aretina iray izay mety hahafaty.
Fambara sy fitsaboana ny hoditra
Mange dia aretina amin'ny hoditra izay misy fiatraikany lehibe amin'ny alika, miteraka soritr'aretina toy ny fahasosorana, mangidihidy na alopecia. Mila fitsaboana veterinera izany.
Ahoana ny fomba hisorohana sy hitsaboana ny halitosis amin'ny alika
Halitosis dia iray amin'ireo olana mahazatra indrindra amin'ny alika. Ahoana no itsaboana azy? Azo sorohana ve izy io amin'ny fomba rehetra? Mandrosoa fa holazainay aminao izany.
Fanafody an-trano hitsaboana kohaka amin'ny alikanay
Mijaly kohaka be ve ny alikao ary tsy hainao ny manafoana azy? Ankoatra ny fandehanana any amin'ny mpitsabo dia manandrama ireo fanafody voajanahary ireo.
Torohevitra hikarakarana alika jamba
Ny alika jamba dia mitaky fikarakarana manokana ao anatiny sy ivelan'ny trano, ankoatry ny fizahana ny fiompiana matetika.
Ahoana ny fomba fihetsika raha efa matavy loatra ilay alika
Ny alika efa matavy loatra dia manana olana mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamany, noho izany dia tsy maintsy tsaboina faran'izay haingana.
Olana mahazatra amin'ny alika antitra
Betsaka ny olana sy aretina miseho rehefa mihalehibe ny alika, ka tokony ho fantatrao izany.
Ahoana ny fomba hisorohana ny hatavezina amin'ny biby fiompintsika
Zava-dehibe ny fisorohana ny hatavezina amin'ny alika, satria ny lanjan'ny lanjany loatra dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana maharitra maro.
Ahoana no ahafantarako raha manana sery ny alikako?
Tsy salama ny volonao Fantaro raha marary izy. Midira ary holazainay aminao ny fomba hahafantarana raha manana sery ny alikako ary ahoana no hanampiana azy hihatsara.
Malahelo ny alikako: inona no tokony hataoko?
Malahelo ve ny alikanao? Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay ny mety ho vokatr'izany sy ny azonao atao mba hampisondrotana ny fanahinao.
Ahoana no hahalalana raha voan'ny aretin-tratra ny alikao
Fantaro ny fomba hahalalana raha manana alika amin'ny alika ny alikao, olana iray izay miteraka aretina mitambatra.
Fambara lehibe amin'ny hyperthyroidism amin'ny alika
Ny hyperthyroidism dia aretina amin'ny tiroida tiroida izay mety hitranga amin'ny antony samihafa ary misy ny soritr'aretin'izy ireo mitaky fitandremana veterinera.
Chondroprotektor voajanahary ho an'ny alika
Manana alika efa antitra ve ianao ary manahy fa manomboka izao dia mety hijaly be? Ampidiro ary fantaro ny fomba hiadiana amin'izany.
Rahoviana no hataoko vaksiny miady amin'ny haromotana ny alikako?
Manontany tena ve ianao hoe rahoviana no hanao vaksiny ny alika ho an'ny haromotana? Raha manana fisalasalana ianao, midira ary holazainay izay rehetra ilainao ho fantatra momba io aretina io.
Cryptorchidism amin'ny alika: inona izany ary ahoana no itondrana azy?
Fantatrao ve izay cryptorchidism amin'ny alika? Ity aretina ity, raha tsikaritra mialoha, dia tsy matotra, fa zava-dehibe ny fahalalana momba izany. Miditra.
Ny aretina efatra ratsy indrindra alohan'ny alika
Te hahafantatra ve ianao hoe iza no aretina efatra ratsy indrindra ho an'ny alika ary ahoana no hiadiana aminy? Midira ary tadiavo mora foana.
Famantarana fa marary ny alikanao
Jereo ny famantarana tsy azo lavina fa marary ilay alika. Izy ireo dia zavatra kely izay milaza amintsika fa misy zavatra tsy mety.
Fambara sy fitsaboana ny salohim-baravarankely
Moa ve ny alikanao mijaly tsy tapaka amin'ny aretin-tsofina fa tsy fantatrao ny antony mety hitranga? Te hahafantatra ny soritr'aretin'ny sofin-trondro va ianao? Midira ary fantaro.
Ny antony sy ny fitsaboana ny uveitis amin'ny alika
Mijaly amin'ny alàlan'ny maso ve ny alikanao? Azonao atao ve ny mijaly amin'ny aretin'ny uveitis ary tsy hainao ny mitsabo azy? Midira ary fantaro.
Kennel kohaka, ny fomba hahafantarana azy
Ny antsoina hoe kohnel kennel dia mety hitranga amin'ny karazana alika rehetra, ary na dia tsy mampidi-doza aza dia mety hiteraka pnemonia raha tsy tsaboina.
Lazainay aminao ny fomba hanasitranana stye alika amin'ny fanafody voajanahary. Fantaro izay tokony hataonao mba hahasalama ny masonao indray.
Fa maninona no marary ny vavonin'ny alika
Izahay dia mijery ny antony mahazatra mahatonga ny aretin-kibo alika. Zava-dehibe ny fanekena azy ireo hahafantarana raha mila mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby ianao.
Aretina mety hijaly ny alikantsika
Tandremo ny lisitry ny aretina mahazatra indrindra izay mety hijaly ny biby fiompintsika ary raha mahita famantarana ny iray amin'izy ireo ianao dia mandosira mankany amin'ny dokotera.
Fambara, aretina ary fitsaboana myiasis amin'ny alika
Fantatrao ve ny momba ny myiasis amin'ny alika? Raha te hahalala bebe kokoa momba ny soritr'aretiny, ny diagnostika ary ny fitsaboana azy ianao, dia vakio.
Inona no aretina mahazatra indrindra amin'ny alika fiompy?
Lazainay aminao hoe inona ny aretina mahazatra indrindra amin'ny alika fiompy sy ny zavatra tokony hataonao raha mieritreritra ianao fa manana izany. Miditra.
Inona ny fihary alika an'ny alika?
Ny fihary anal dia kitapo kely miorina amin'ny lafiny roa amin'ny lohan'ny alika, izay mitahiry fako. Tokony hofongorana matetika izy ireo.
Ahoana no hahalalako raha misy alikaola ny alikako
Iray amin'ireo aretina lehibe ateraky ny sakaizantsika io. Mandrosoa ary holazainay aminao ny fomba hahafantarana raha misy distemper ny alikako.
Fanafody an-trano ho an'ny glaucoma amin'ny alika
Voan'ny aretina voan'ny aretina ve ny namanao? Midira ary holazainay aminao hoe inona ny vahaolana an-trano amin'ny glaucoma amin'ny alika.
Ny antony mahatonga ny fandokoana ny orona amin'ny alika
Ny tsy fandokoana eo amin'ny oron'ny alika dia mety ho famantarana ny olana isan-karazany, manomboka amin'ny sunburn na amin'ny allergy ka hatramin'ny aretina lehibe.
Fa maninona ny alika no very loko eo amin'ny orona?
Misy antony samihafa mety hiteraka fatiantoka loko eo amin'ny oron'ny biby fiompintsika, koa tandremo tsara ilay lahatsoratra.
Aretim-piterahana amin'ny alika
Ny aretin'andoha tsy fahampian-tsakafo amin'ny alika dia miavaka amin'ny tahotra izaitsizy amin'ny ankamaroan'ny fanentanana manodidina.
Valan'aretina na vato voa?
Ny aretin-kibo amin'ny alika dia mitranga rehefa miditra ao anaty tatavia ny bakteria na mikraoba hafa, ka miteraka soritr'aretina isan-karazany.
Te hiaro azy amin'ny vokatra voajanahary ve ianao? Raha izany dia midira fa holazainay aminao hoe inona ny vahaolana an-trano hanafoanana ny kongona avy amin'ny alikako.
Inona no hatao raha voan'ny phlebitis ny alikako?
Ny phlebitis dia aretina iray izay mamaivay ny lalan-drà ary io aretina io dia miavaka amin'ny fananganana lalan-drà ao amin'ny lalan-dra.
Ny fomba hitsaboana katarak eo imason'ny alika
Izahay dia manazava ny fomba hitsaboana katarakitra eo imason'ny alika, mba hahafahanao mandray ny fepetra ilaina ary hanampy ny namanao volom-borona tsara indrindra.
Ahoana ny fomba hitsaboana glaucoma amin'ny alika
Azavainay ny fomba hitsaboana glaucoma amin'ny alika, iray amin'ireo aretina atahorana indrindra amin'ny maso izay azon'ny namantsika atao.
Limber tail tail amin'ny alika
Androany isika dia hiresaka lohahevitra mifandraika amin'ny biby fiompintsika, ny aretina Limber's tail, izay, araka ny anarany, dia misy ifandraisany amin'ny rambony.
Fitandremana rehefa misoroka otitis amin'ny alika
Ny fisorohana ny fisehoan'ny otitis amin'ny alika, dia mandalo amin'ny fanekena ireo soritr'aretina mifandraika amin'izany, ka mariho tsara.
Bibikely na kongona otodectika amin'ny alika
Ny scabies Otodectes dia tsy inona fa ny soritr'aretina ateraky ny fisian'ny otodectes cynotis mite ao amin'ny lavaka fihainoana.
Ahoana no fiantraikan'ny sofina serealy amin'ny alika?
Rehefa mifampikasoka amin'ny tany ireo spikes dia mihetsiketsika fotsiny izy ireo mandra-pahatongany mankany amin'ny hoditry ny alika ary tena maharary.
Inona avy ireo karazana marenina amin'ny alika
Lazainay aminao ny karazana marenina amin'ny alika, ary hazavainay ny antony ananan'izy ireo izany. Fantaro hoe iza avy ireo karazana manana predisposition lehibe kokoa.
Inona ny aretina Bulldog brachiocephalic syndrome?
Ity aretina ity dia vokatry ny tsy fetezan'ny pharyngeal sy ny orona izay matetika nolovaina tamin'ity karazany ity, tao Bulldogs.
Fitsaboana fery tsy maloto ao anaty alika
Amin'ireo fery, ny mahareraka indrindra amin'ny fitsaboana azy dia ny fery tsy miasa, mba hitsaboana azy dia mila fotoana sy faharetana be ianao.
Inona ny mange demodectic amin'ny alika?
Ny scabies dia aretina ateraky ny bibikely hita eo ambonin'ny hoditra sy eo amin'ny sofina, noho izany zava-dehibe ny famonoana azy ireo.
Torana tsy tapaka ve ny Boxer anao?
Raha manana mpanao ady totohondry ianao ary mahatsapa fa reraka haingana izy ary maty tampoka, dia mety hisy patolojia ao am-pony.
Ny fihenan'ny volo amin'ny alika
Ny fahaverezan'ny palitao amin'ny alika dia zavatra mahazatra, saingy afaka manafina aretina izy raha be loatra ny fatiantoka, noho ny korontana hormonina.
Inona no hatao raha tsy hijanona mandoa ny alikanao?
Ny ankamaroan'ny fotoana dia noho ny olana iray izay azo vahana mora foana, fa amin'ny fotoana hafa dia mety hanafina aretina lehibe izany.
Colitis ao amin'ny alika: antony sy fitsaboana
Ny colitis dia fivontosan'ny tsinay izay miteraka fivalanana ary mila fitandremana vetivety ny fitsaboana ny biby. Izy io dia mety manana ny niandohany tamina antony maro.
Fa maninona ary ahoana ny miborosy nify alika
Fantatrao ve fa ny alikanay dia tratry ny aretina mahazatra any amin'ireo biby mampinono antsoina hoe "aretina vanim-potoana"?
Soritr'aretina gingivitis amin'ny kaninina
Ny gingivitis amin'ny kanine dia aretina iray matetika vokatry ny tsy fahadiovana nify, ary ny fambara azy dia ny rà, ny halitosis ary ny fivontosana.
Ahoana no hamantarana raha miolakolaka ny alikako
Lazainay aminao ny fomba hahafantarana raha misy alikaola amin'ny alika ny alikako, aretina iray izay raha tsy voatsabo ara-potoana dia mety hahafaty an'ilay volony.
Inona no tokony ho fantatra momba ny strabismus amin'ny alika
Strabismus dia olana iray, sahala amin'ny olombelona, ​​dia misy fiantraikany amin'ny alika ihany koa, ary mahatonga ny maso roa tsy hitodika mankany amin'ilay teboka iray ihany.
Ahoana ny fomba hitsaboana ny dermatitis an'ny alika
Lazainay aminao ny fomba hitsaboana ny dermatitis an'ny alika, sy ireo karazany isan-karazany ao mba hahafahanao mahafantatra ny fomba hanampianao ny namanao.
Inona no atao hoe brachycephalic syndrome?
Ny karazana voan'ny brachycephalic syndrome dia ny Boston Terriers, ny bulldog frantsay, ny bulldog anglisy, ny Pug, ary ny Shih Tzu.
Ahoana no hahalalana raha manana dermatitis ny alikako
Lazainay aminao ny fomba hahalalana raha manana dermatitis ny alikako, aretina iray mahazatra indrindra amin'ity biby ity izay mety hiteraka tsy fahazoana aina be.
Ahoana no hikarakarana ny peratra amin'ny alika miaraka amin'ny fanafody ao an-trano
Efa voamarina fa voan'ny banworm ve ny namanao? Atambaro ny fitsaboana amin'ny torohevitray. Midira hahafantatra ny fomba hikarakarana ny peratra amin'ny alika misy fanafody ao an-trano.
Fantaro ny fomba hitsaboana mange amin'ny alika amin'ny fanafody ao an-trano. Araho ny torohevitray hahafahan'ny namanao sitrana haingana araka izay tratra.
Ahoana ny fomba hamantarana ny hafanana amin'ny alika
Jereo hoe ahoana no ahalalana ny mety hisian'ny fikorontanan'ny hafanana ao amin'ny alika sy ny fomba tsotra indrindra hialana amin'izany mba hikarakarana ny fahasalaman'ny alika.
Alika sy aretin'aty
Ny aretin'aty dia toe-javatra mahazatra amin'ny alika maro mandritra ny androm-piainany, izay mety hiteraka fahafatesana aza. Tandremo ary!
Ahoana ny fomba hanampiana alika amin'ny fanahiana misaraka
Ny fanahiana amin'ny fisarahana dia iray amin'ireo aretina fahita matetika iharan'ny alika maro ary ny ankamaroan'ny antony dia noho ny tsy fisian'ny tompony
Fitsaboana ao an-trano ho an'ny kohaka alika
Miady kohaka ve ianao nefa manana fiainana ara-dalàna? Raha izany dia holazainay aminao ny vahaolana ao an-trano amin'ny kohaky ny alikako izay azonao omena azy hihatsara.
Ahoana no hitsaboana coronavirus canine
Lazainay aminao hoe inona izany ary ny fomba hitsaboana coronavirus amin'ny canine, iray amin'ireo aretina mifindra amin'ny aretina mahery vaika mety hananan'ny alika.
Ny kohaka ao anaty alika, inona no dikan'izany?
Ny kohaka ao amin'ny alika dia mety manana ny fiandohany amin'ny antony samihafa, manomboka amin'ny olana madinidinika ka hatramin'ny aretina lehibe. Mila fitandremana veterinera eo noho eo.
Ahoana ny fomba hijerena raha voan'ny tazo ny alikanao?
Lazainay aminao ny fomba hijerena raha voan'ny tazo ny alika, ary inona no fikarakarana tokony homena azy mba hahitanao ny fahasalamany sy ny fahasambarany faran'izay haingana.
Inona no hatao raha azon'ny alikao ny hataony?
Ireto no dingana tokony hataonao raha hitanao fa manomboka mandresy lahatra ny alikanao, manan-danja tokoa ny fanarahana azy ireo amin'ilay taratasy.
4 mariky ny vanin-taolana amin'ny alika
Mahita famantarana efatra mazava amin'ny vanin-taolana amin'ny alika, aretina iray izay misy fiantraikany amin'ny alika miharo hatrany.
Ny alikako dia manenjika ny vavony foana, maninona?
Ny mangidihidy eo am-bavaky ny alika dia mety vokatry ny antony marobe; manomboka amin'ny fidiran'ny vatan'ny vahiny ka hatrany amin'ny areti-mandringana.
Ahoana ny fomba hisorohana ny sery amin'ny alikao
Mitadiava tetika tsotra vitsivitsy hisorohana ny sery ao amin'ny alika, aretina mahazatra ary tsy matotra nefa mety ho sarotra.
Aretina: Canine Ehrlichiosis
Canine Ehrlichiosis dia aretina ampitain'ny kaikitry ny kongona, izay misy fiatraikany amin'ny vatan'ilay alika, ary ahiana ny ainy.
Torsion gazy amin'ny alika
Te hahafantatra ny fomba hisorohana ny kibo miolakolaka amin'ny alika ve ianao? Olana mety hahafaty ity. Ampidiro dia holazainay aminao ny fomba hisorohana azy.
Neuroitis optika amin'ny alika
Ny neuritis optika dia fivontosan'ny hozatra optika intraocular na infraorbital, koa jereo ny soritr'aretin'ny alikao mba ho mailo.
Fambara sy fitsaboana parasy amin'ny alika
Fantaro raha manana parasy ny alikanao ary fantaro ny soritr'aretina sy ny fitsaboana misy miady amin'izy ireo, ataovy ho an'ny fahasalaman'ny alikao.
Ahoana ny fomba hitsaboana pyometra amin'ny canine
Azavainay hoe inona izany ary ny fomba hitsaboana pyometra amin'ny canine, aretina izay mety ho tena lehibe raha tsy voatsabo ara-potoana. Miditra.
Inona ny gripa kaninina?
Ny gripa kaninina na ny gripa any amin'ny alika dia aretina azo avy amin'ny taovam-pisefoana izay azo miparitaka amin'ny alika iray mankany amin'ny iray hafa, koa ianaro ny fomba hiadiana amin'izany.
Ny bakteria Streptococcus no antony mahatonga ny aretina maro amin'ny alika
Ny bakteria Streptococcus no antony mahatonga ny aretina maro amin'ny alika, ny aretina izay mety ho areti-mifindra sy mahafaty, koa mariho.
Virosy distemper canine
Distemper dia iray amin'ireo aretina ratsy indrindra azon'ny alika alika, mitranga bebe kokoa amin'ny alika kely ary raha tsy tsaboina izy io dia mety hahafaty.
Aretina parasitika: Babiosezy kaninina
Canine Babesiosis dia aretina ampitain'ny tsiranoka amin'ny alàlan'ny rora, mampiditra protôzônia manimba ny sela mena mena ao amin'ny alika.
Fahasalaman'ny alika Lhasa Apso
Ity karazany ity dia avy amin'i Tibet, izay karazany kely, miavaka amin'ny palitao matevina, ny toetrany be fitiavana ary ny heriny.
Peritonitis ao amin'ny alika
Peritonitis dia fivontosan'ny peritoneum, ny firakofana ny faritra misy ny kibon'ny alika, ary mila fitandremana mialoha ny fiompiana.
Aretina tsy fahita any amin'ny alika
Betsaka ny aretina tsy fahita sy tsy fantatra izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny biby fiompintsika, mianatra hoe iza izy ireo ary ahoana no fomba hiadiana amin'izany.
Osteoarthritis amin'ny alika antitra
Ianaro ny momba ny soritr'aretina sy ny antony mahatonga ny aretin'ny osteoarthritis izay miseho kokoa noho ny alika tanora kokoa noho ny alika kely sy ny fomba hisorohana azy.
Aretina Addison amin'ny alika
Zava-dehibe ny fahalalana ny antony sy ny soritr'aretin'ny aretina Addison, satria mety hitranga amin'ny alika tanora sy alika zokinjokiny.
Fanafody an-trano ho an'ny vanin-taolana canine
Voamarina fa voan'ny aretin-tratra ny namanao? Raha izany dia midira fa holazainay aminao ny fomba hanampiana anao. Jereo hoe inona ny fanafody any an-trano amin'ny aretin-tratra.
Ahoana no fanasitranana canal parvovirus
Efa nanomboka nandoa ve ianao ary misy fivalanan-dra? Raha izany dia midira fa holazainay aminao ny fomba fanasitranana parvovirus canine.
Fambara sy fitsaboana "kohnel kennel"
Tokony ho fantatrao ny antony, ny soritr'aretina ary ny fitsaboana tokony hampiasainay raha voan'ny aretina mampatahotra ny alikantsika.
Aretina Von Willebrand ao amin'ny alika
Ny aretin'i Von Willebrand dia tsy ara-dalàna izay misy fiantraikany amin'ny fikorianan'ny rà, miteraka ra mandeha matetika ary fanasitranana ny ratra sarotra.
Ahoana no ahalalana ny soritr'aretin'ny osteoarthritis amin'ny alika
Osteoarthritis amin'ny alika dia olana iray misy fiantraikany amin'ny tonon-taolana. Tokony ho fantatrao tsara kokoa ny soritr'aretiny sy ny fomba hisorohana azy tsy handeha bebe kokoa.
Hypokalemia amin'ny alika
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny aretina Hypokalemia amin'ny alika, toy ny antony, soritr'aretina ary ny fomba hitsaboana azy mba tsy hialany.
Famantarana ny homamiadan'ny tsinay ao amin'ny alika
Mitandrema tsara ary mianara mamantatra ireo soritr'aretin'ny homamiadan'ny vavony sy ny tsinay alika alohan'ny tara loatra.
Ahoana no hahafantarana raha voan'ny tazo ny alikako
Lazainay aminao ny fomba hahafantarana raha voan'ny tazo ny alikako ary inona no azonao atao hahasitrana azy haingana araka izay tratra. Ampidiro ary fantaro ny fomba hanampianao ny namanao.
Famonoana an'i Lyme
Ny aretin'ny Lyme dia aretina iray vokatry ny tsipika iray. Ka tokony ho fantatrao ny soritr'aretina, ny antony ary ny fomba hitsaboana an'io aretina io.
Olana amin'ny fahitana any Samoyeds
Tandremo tsara ary jereo ny mason'ilay alikao raha sendra mieritreritra ianao fa mety ho voan'ny aretin'ny maso izy.
Fitsaboana lehibe amin'ny kongona
Ianaro ny fomba, fomba ary fitsaboana tsara indrindra hamaranana ny tapakila izay mahatonga ny fiainana tsy ho tantin'ny alikao indray mandeha.
Ny fikitihana dia katsentsitra izay matetika mamindra areti-mifindra amin'ny alikanay, izay tena manandanja tokoa amin'ny famongorana azy ireo.
Mety voan'ny aretin-tsofina ve ny alika?
Ny alika toy ny olona dia mety hijaly amin'ny aretin-tsofina sy ny aretina toy ny otite, noho izany dia tokony hitandrina isika amin'ny fitondran-tena izany
Hernia mitambatra amin'ny alika
Ny karazana sasany dia mora mamorona hernias umbilical, fa mety manontany tena ianao hoe inona ireo karazana hernia ireo? Raiso an-tsoratra.
Tandremo ny filaharan'ny kesika
Tsy maintsy ho fantatra ny raharahan'ny filaharana kesika, satria ny fifandraisana aminy dia mety hisy vokany lehibe amin'ny alika.
Ny fomba hitsaboana otitis canine
Efa nanomboka maimbo ve ny sofin'ny alikao? Raha mandohalika sy rangotra koa izy dia mahaliana anao ity lahatsoratra ity. Fantaro ny fomba hitsaboana otitis canine.
Tsy fanjarian-tsakafo amin'ny alika: ahoana no ahalalanao fa manify loatra ny alikanao?
Topazo maso ireo fambara ireo raha te hahalala raha marary alika ny alikao ary inona ny ambaratonga ary ahoana no hamahana azy amin'ny alàlan'ny sakafo tsara.
Ahoana no hahalalana raha manana piometra ny alikako
Manontany tena ve ianao hoe ahoana no ilazana raha manana piometra ny alikako? Raha izany dia midira fa holazainay aminao ny soritr'aretina sy ny fitsaboana azy ireo.
Menaka ilaina sy menaka voanio dia mandaitra amin'ny aretin-koditra
Ny fandinihana iray dia mampiseho fa ny menaka manitra sy ny menaka voanio dia mahasoa amin'ny fitsaboana alika voajanahary amin'ny olan'ny hoditra.
Mampidi-doza ho an'ny alika ve ny voaloboka?
Ny voaloboka dia sakafo misy poizina ary mampidi-doza tokoa amin'ny fahasalaman'ny alikantsika, satria mety hiteraka tsy fahatomombanan'ny voa sy mety hahafaty mihitsy aza izany.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny coronavirus amin'ny canine
Nanomboka nivalan-kibo tampoka ve ny alikanao volo? Mahita azy milomano ve ianao? Raha izany dia midira fa holazainay aminao ny famantarana ny coronavirus amin'ny canine.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fiviliana amin'ny vavony
Tsy azo atao foana ny misoroka ny kibo miolikolika, fa afaka manana fahazarana mahazatra kosa isika mba tsy ho azon'ny alika hijaly.
10 famantarana ny homamiadana amin'ny alika
Raha miahiahy momba ny fahasalaman'ny alikanao ianao dia tokony hifantoka tsara amin'ireo soritr'aretina sy famantarana ireo izay mety hanondro fa voan'ny homamiadana ny biby fiompintsika.
Ahoana no hahafantarana raha misy filariasis ny alikako
Ity no fomba hilazana raha manana alika ny alika, aretina parasito fantatra amin'ny anarana hoe heartworm aretina izay mety ho matotra be.
Ahoana no hahafantarana raha manana parvovirus ny alikako
Lazainay aminao ny fomba hahafantarana raha manana parvovirus ny alikako mba ho mora aminao kokoa ny hahafantatra hoe rahoviana ianao no tokony hankany amin'ny dokotera.
Ahoana ny fomba hisorohana ny dermatitis amin'ny alika
Lazainay aminao ny fomba hisorohana ny dermatitis amin'ny alika, aretina izay manelingelina be satria mahatonga azy ireo hangidihidy sy tsy mahazo aina.
Fambara fa mijaly noho ny fanahiana ny alikantsika
Ny fitondran-tena manimba, ny fihenan'ny volo ary ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana dia isan'ny fambara mahazatra amin'ny alika.
Ahoana no hahafantarana raha manana katarakta ny alikako
Jereo hoe ahoana no hahalalana raha misy katarakta ny alikako: inona ny antony, ny soritr'aretina mety ananany, ary inona ny fitsaboana azy.
Fitsaboana ao an-trano ho an'ny fitohanana amin'ny alika
Manana alika ve ny alikao amin'ny famindrana? Raha izany dia raiso amin'ny fanafody ao an-trano ho an'ny fitohanana amin'ny alika izay soso-kevitray: voajanahary sy mandaitra izy ireo.
Ahoana no hilazana raha manana alika hipaka ny alika
Efa nanomboka nandeha hafahafa ve ny alikao? Raha izany dia mety tsy hahomby ny valahanao. Ampidiro ary fantaro ny fomba hahafantarana raha voan'ny displasia ny alika.
Ahoana no hahalalana raha manana diabeta ny alikako
Ny diabeta canine dia aretina iray izay mety hampidi-doza tokoa. Midira ary holazainay aminao ny fomba hahafantarana raha voan'ny diabeta ny alikako ary inona ny fitsaboana azy.
Bevohoka ara-tsaina amin'ny bitika
Ny fitondrana vohoka ara-psikolojika amin'ny bitika dia misy soritr'aretina sasany izay tsy maintsy fantarintsika ho fantatra rehefa mitranga izany ary mitondra azy ireo any amin'ny mpitsabo biby.
Ahoana no hahafantarana raha manana disk herniated ny alikako
Manana olana amin'ny fandehanana tsara ve ny volonao? Mahatsiaro fanaintainana ao an-damosinao ve ianao? Raha izany dia midira fa holazainay aminao ny fomba hahafantarana raha manana kapila herniated ny alikako.
Ny fomba hitsaboana ny fivalanan'ny alika
Io no olana mateti-pitranga indrindra eo amin'ny alikanay, fa ahoana no fomba hitondrako ny fivalanan'ny alika? Midira ary holazainay aminao ny fomba fanatsarana azy.